Marka Aad Siyaasi Sax Ah Tahay Iyo Beesha Habar-Yoonis Si Waafaqsan Saami-Qeybsiga | HAYAAN NEWS
Marka Aad Siyaasi Sax Ah Tahay Iyo Beesha Habar-Yoonis Si Waafaqsan Saami-Qeybsiga
Abtirsiga ehelnimada ahi dhaqanka nolosheena ceeb iyo canbaar toona kuma leh ee bal maantana aan u kala rogo nimaan dhaadin qaranka Habar-Yoonis. Aan u kala rogo si waafaqsan siyaasadda iyo saami-qaybsiga dawliga ah ee qaneecaadka xasillooni iyo iimaan qab siyaasadeed ku kasbi karta.
Marka ay timaaddo siyaasad – hadda ma aha marka ay abtirsi uun ku joogto xaajo – waa yeedhiska siyaasadda deegaamaysan ee fooraha wax hel iyo wax waaga saami-qaybsiga utunta u ah ee nin Madaxweyne noqday ay tahay in uu maanka kiisa xasuusta iyo miyirka kiisa ogaalka ah ku xis fadhiisiyo.
Habar – Yoonis waa qaran qab weyn, taariikh qaad quman leh oo aan cidi na quudhsan karin. Waa abtirsi ehel ah oo daw yaqaan ah. Waa gob xilkas ah oo godobteeda, gaashaankeeda, garawshaheeda iyo gammuunkeedaba gar iyo garaadba u leh oo aan xaajo gurracan iyo ganaf qollooca midna aan ku dagmin.
Waa qabiil – haddana qaran ah oo walaalkiisa la qayrka ah aan qalad ku maagin, qadaf u la tagin – gar-darro-se ma qaato. Haddii ay sitaa tahay maxaa la gudboon nin kasta oo korka sare fadhiista marka uu qaran boqrado?
Waxa la gudboon in uu fahmo maanka Cali Siciid oo hoos u Xaaji Saalax Cali ah, gaar na u Xasan Xaaji ah faracna u ah Samatar Xassan, Cisman Xassan, Cabdi Xassan, Samakaab Xassan, Siad Xassan, Abdulla Xassan. Dawladnimo laanta khusaysa iyo saami la irkado oo siyaasi ah dhankaa Cali Siciid dhan u dheh.
Dhan kale iyo ilbaxnimada siyaasadeed ee taariikhda faca weyn ee Muuse Carre oo hoos u Fiqi Muuse ah, gaar na u Sammane Fiqi, Jibriil Fiqi iyo Aadan Fiqi ah, Faracna u ah Cali Aadan, Muse Aadan, Muxummed Aadan iyo Jibriil Aadan. Dawladnimo laanta khusaysa iyo saami la irkado oo siyaasi ah dhankaa Muuse Carre iyana dhan kale u dheh.
Dhan kale iyo Farshaxannimada Isxaaq Carre iyo xulasho kula gudboon oo u kala dhigan haybta hoose ee Qaasim Isxaaq oo hoos u Aadan Qaasim ah oo Cali Aadan ka ah, gaar na u Rooble Cali ah, faracna u ah Axmed Roobleh, Cismaan Roobleh, Allamagan Roobleh, Maxamud Roobleh, Wacays Roobleh.
Farshaxannimada Isxaaq Carre dhan kale oo faro badni ah oo la ga joogsadana leh. Waana tiirka Cabdalle Isxaaq oo si guud u Axmed Xasan ah amma Cabdalle Xasan ah. Kala saaf saami iyo xal xidhaale siyaasi ah oo deegaan Hargeysa gobol na ku Maroodijeex ah iyana dhan kale u dheh.
Araari waa ay idlaataa nuxur inta uu hadhsan yahay e, halka aan u socdo iyo aan u daadego meel ay u dhimatay qarannimada faca weyn oo ku Ismaaciil Carre ah. Hal mar jeedaali dheegga Sacad Yoonis adiga oo aan u kala saafin Maxamuud Sacad, Iddareys iyo Barkad.
Dhan kale oo ka sii mug weyn u jeedso – waa Muuse Ismaaciil e, Tuurwaa dhankii dheeho ishana ha la gafin Cismaan Tuurwaa oo gaar u Xaamud Cismaan ah faracyadiisa Cabdi Xaamud, Cabdalle Xaamud iyo Maxamuud Xaamud. Dhan kalena bal daymood iyo Cawl Cismaan oo dhegtaadu yaaney ka awdmin Bayleh Ugaadhyahan oo faracna u ah Maax Bayle, Gadiid Bayle, Cisman Bayle, Galaame Bayle.
Dhuuxa weyn iyo halka ay saldanadu taal ee talo ku meeraarto ku naso oo dul joogso. Waa dheegga Cabdalle Ismaaciil – waxase aan kaaga yeedhin inta meeriska siyaasadda dhaqanku dul hoganayo ee Nuur iyo Naalleeyaba ku qasban yahay. Muuse Cabdalle taariikh halgan baad ku taqaanney e, ku baro turub siyaasadeedka Habar-Yoonis doorkan isaga ayaa ugu badshay eh.
Nimankii Cumar Cabdalle hoggaankoodu waa Ugaadh Cumar iyana warkoodu halkii kama uu durkin ardaayadana iyaga ayaa ugu saameyn weyn dhinaca ….. Nimankii Aadan Cumar kaga sidkanow Maxamed Aadan hoos na u Xildiid Maxamed oo Xasan Xildiid ah (Gunbuur). Halkaa aan kuu dul joogsado e, ololaha doorashadu dhaqaale ahaan waa halkii uu ka socday ee fiiro gaar ah u yeelo.
Nimankii degmada Oodweyne ee Cismaan Xildiid war kugu ma seegana. Dhan waa u Ba-Dhulbahante (Muumin Cismaan, Cabdi Cismaan, Cali Cismaan iyo Maxamuud Cismaan) Dhan kalena waa qamaamuurtii iyo Xirsi Cismaan oo aynaan maanta oo dhan ka gayooneyn abtirisigooda. Hal se aan kaaga iftiimiyo e, isha ha la seegin faraca hoose ee Siciid Xirsi iyo Canaanshe Xirsi.
Akhriste qoraalka kan u faham farriin siyaasadeed oo cid ku socota. U faham dal wanaajin iyo caddaalad. U faham is ahaanshiyo iyo walaalnimo. U faham waxbarasho iyo cashar aan ku siiyey oo intiina siyaasadda jecel faa’ido u ah. Insha Allahu Somaliland oo siman, walaalo ah oo aan sadbursiinyo jirin. Waxa aan ka raalli galinayaa intiina aan nuxurka qoraalka aan ka leeyahay fahmin – waanan u kasay taa. Mahadsanidin